IATA: Ny fanirian'ny toetr'andro amin'ny sidina dia taratry ny tanjon'ny zotram-piaramanidina Net-Zero
Home » Lahatsoratra farany farany » Aviation » IATA: Ny fanirian'ny toetr'andro amin'ny sidina dia taratry ny tanjon'ny zotram-piaramanidina Net-Zero
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • News sustainability • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News
Ny zotram-piaramanidina tamin'ny AGM IATA faha-77 tany Boston, tamin'ny Oktobra, dia nanaiky ny hahatratra ny entona karbônina tsy misy aotra amin'ny taona 2050, mifanaraka amin'ny tanjon'ny fifanarahana Paris mba hitazonana ny hafanan'ny tany ho 1.5 degre.
Ny vokatra miavaka avy amin'ny COP26 dia ny fihetsiky ny firenena 23 nanao sonia ny Fanambarana Iraisam-pirenena momba ny toetr'andro momba ny toetr'andro.
Ny Fanambarana dia manaiky ny filan'ny fiaramanidina mba "hitombo maharitra" ary mamerina ny andraikitry ny ICAO amin'ny fanatanterahana tanjona fohy, antonony ary maharitra ho an'ny indostria.
Fiantohana ny fahombiazana ambony indrindra amin'ny tetik'asa fanodinkodinana sy fampihenana karbôna ho an'ny sidina iraisam-pirenena, ary ny fampivoarana sy ny fametrahana solika maharitra amin'ny fiaramanidina no tanjona fototra amin'ny Fanambarana.
The Fikambanan'ny fitaterana an'habakabaka iraisam-pirenena (IATA) dia nandray ny fanoloran-tena hanamafisana ny hetsika momba ny toetr'andro natao tamin'ny COP26, ary niantso ny ezaka eran-tany amin'ny fanafoanana ny karbôna amin'ny fiaramanidina mba ho tohanana amin'ny politikam-panjakana mahomby sy mahomby.
Mipetraka ivelan'ny fizotran'ny COP ny fitantanana ny faneken'ny toetr'andro iraisam-pirenena ary andraikitry ny International Civil Aviation Organization (ICAO). Na izany aza, ny zotram-piaramanidina ao amin'ny faha-77 Iată Ny AGM tany Boston, tamin'ny Oktobra, dia nanaiky ny hahatratra ny entona karbônina aotra amin'ny taona 2050, mifanaraka amin'ny tanjon'ny fifanarahana Paris mba hitazonana ny hafanan'ny tany ho 1.5 degre.
"Ny zotram-piaramanidina dia eo amin'ny lalana mankany amin'ny famoahana karbônina tsy misy aotra, mifanaraka amin'ny fifanarahana Paris. Isika rehetra dia maniry ny fahafahana manidina maharitra. Asa goavana mitaky ezaka iraisan'ny indostria sy fanohanana avy amin'ny governemanta ny fanatrarana ny emission net-zero. Ny fampanantenana natao tao amin'ny COP26 dia mampiseho fa maro ny governemanta no mahatakatra fa ny fanalahidin'ny fandrosoana haingana dia ny fandrisihana ny fanovana ara-teknolojia sy ny famatsiam-bola amin'ny vahaolana vaovao. Marina indrindra izany amin'ny solika maharitra amin'ny fiaramanidina, izay hanana anjara toerana lehibe amin'ny fiatrehana ny fiantraikan'ny fiaramanidina amin'ny tontolo iainana — mila fandrisihana sahaza avy amin'ny governemanta izy ireo mba hanamafisana ny famokarana,” hoy izy ireo. Willie Walsh, Tale Jeneralin'ny IATA.
Ny vokatra miavaka avy amin'ny COP26 dia ny fihetsiky ny firenena 23 nanao sonia ny Fanambarana Iraisam-pirenena momba ny toetr'andro momba ny toetr'andro. Ny Fanambarana dia manaiky fa ilaina ny fiaramanidina mba "hitombo maharitra" ary mamerina indray ICAONy anjara asan'ny fampiharana ny tanjon'ny toetr'andro fohy, antonony ary maharitra ho an'ny indostria. Ny fiantohana ny fahombiazan'ny Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA), ary ny fampivoarana sy ny fametrahana solika maharitra (SAF) no tanjona fototra amin'ny Fanambarana.
“Mankasitraka ireo fanjakana izay nanao sonia ny fanambarana iraisam-pirenena momba ny toetr'andro momba ny toetr'andro izahay ary manentana ireo firenena maro hanolo-tena amin'ity hetsika ity. Ny drafitra matanjaka sy azo tanterahina amin'ny 2050 izay neken'ny zotram-piaramanidina mpikambana ao amin'ny ICAO dia mety hampiasaina tsara ho an'ireo firenena mpikambana ao amin'ny ICAO rehefa mandroso miaraka amin'ny rafitra manerantany sy tanjona maharitra amin'ny fampihenana ny karbaona amin'ny fiaramanidina izy ireo, "hoy i Walsh.